च्याट बाहिरिएपछि दाजूभाईको पर्यो लफडा, बुहारीको खुट्टा ढोग्छु, केही गरेको छैन् । बोलेको मात्रै हो । – Onlines Time
February 10, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on च्याट बाहिरिएपछि दाजूभाईको पर्यो लफडा, बुहारीको खुट्टा ढोग्छु, केही गरेको छैन् । बोलेको मात्रै हो ।
जब प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चिछन्, पछारिन्छन्, फालिन्छन् तब नागरिक समाज उठ्नै पर्छ । मलाई त दु:ख किन लाग्छ भने नागरिक समाजमा त धेरै प्राध्यापकहरु पनि देखिनुपर्ने थियो । त्यो देखिरहेको छैन । प्राध्यापकहरुभित्र पनि बल्नुपर्ने हो । बलेपछि पो छात्र र छात्राहरुलाई उहाँहरुले बाल्न सक्नुहुन्छ । त्यो देखेर मलाई अलिकति दु:ख लागेको छ ।
म जहिले पनि भन्‍ने गर्छु । अमेरिकाको तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका कुरा । उनी अमेरिकाको संविधान लेख्ने सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति थिए । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘तिमीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने तिमीले मूल्य चुकाउनै पर्छ । सधैं सचेत हुनु नै त्यो मूल्य हो । केही पर्‍यो भने उठीहाल्नुपर्‍यो । कसैले औंलामा टेक्दा कम्तीमा ऐय्या त भन्नुपर्‍यो । जानी जानी हो भने टेक्ने मान्छेले माफी माग्नुपर्‍यो । तर ऐय्या पनि नभन्ने त गर्नुभएन ।’
संसद् पुन:स्थापनाको कुरा भइरहेको छ । तर यति गरेर मात्रै सबै कुरा सकिने होइन् । यहाँ हामीले भयानक विकृति देखिसकेका छौं । एउटा हो, विकृत निर्वाचन पद्धति ।
यो कति महँगो बनाएका छौं हामीले । यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । मलाई त कता-कता लाग्छ नागरिक समाज यति बृहत् रुपमा आओस् कि, १३ औं शताब्दीमा बेलायतका किङ जोन भन्ने निरंकुश राजालाई सही ठाउँमा ल्याउन म्यानाकार्टामा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो । त्यस्तै म्यागनाकार्टामा अहिलेका राजनीतिक नेताहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउनुपर्ने भएको छ । निर्वाचनमा जुन खर्च हुने बनाइएको छ, त्यसले नै हो सबै भ्रष्टाचार हुने, गडबडी हुने कारण नै त्यही हो । त्यस्तो अभ्यासलाई नेपालले धान्न सक्दैन । अर्को कुरा हरेक कुरामा उहाँहरुको राजनीतिकरण छ । उहाँहरुले राजनीतिलाई आफ्नो विर्ता पाएजस्तो ठान्नुभएको छ । विश्वविद्यालयमा देख्नुभयो होला, विद्यालयमा देख्नुभयो होला । प्रशासनमा ।
हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप छ । हुँदा-हुँदा संवैधानिक निकायहरुमा पनि उहाँहरुको हस्तक्षेप छ । अब हामीले यसलाई बन्द गर्नै पर्छ । सहनै हुन्न । राजनीतिले गर्नुपर्ने केही कुराहरु छ । तर हेर्नुस्, हरे शिव ! कुनै कुनै बेला त मलाई के गरुँ के गरुँ हुन्छ । मैले चार जना प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमै भेटेर बिन्ती गरेर भनेको छु, ‘विश्वविद्यालयमा तपाईंहरुले हात नबढाउनुस् है । यसरी कहिल्यै राम्रो हुन्न । जुन जुन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, त्यो विश्वविद्यालयले कहिल्यै पनि राम्रो गर्न सक्दैन । तर हेर्नुस्, पटक-पटकभन्दा पनि उहाँहरुले त्यही गरिराख्नुभएको छ । यसको हामीले अन्त्य गर्नैपर्छ ।’
माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आयो, देउवा प्र*चण्ड चकि*त्, नयाँ मोडमा राजनीति ! (भिडियो हेर्नुहोस्)